maxaa keena xubno xanuun
» maxaa keena xubno xanuun
Xubno xanuunku wuxuu dhacaa marka laabatooyinka jidhkaagu ay bararaan ama carjawda laabatooyinku ay baaba’an. Carjawdu waa wax sida barkin oo kale ah ee ku jira laabatooyinka ee ka ilaaliya cadaadiska dhaq-dhaqaaqana ka dhiga mid fudud. Marka ay xajiyadu ruugagga qaarkood ka baaba’aan, lafahaaga ayaa is xoqaya oo kuu keenaya xanuun, barar, iyo tig-tignaan.
• Isticmaal xad dhaaf ah ee laabatooyinka Calaamadaha
• Guduudnaanta maqaarka ruugagga ku hareereysan Baaritaannada
Isla markiiba takhtarkaaga wac haddii:
• Aad isku aragto laabatooyin xanuun oo aan la sharrixin oo daran.
• Maqaarkaaga ku hareereysan laabatooyinku uu guduudan yahay ama kulul yahay marka la taabto.SomaliDoc